Cele News TV – Page 125 – Just another WordPress site
ဆေးရုံတက်နေတဲ့ မိခင်က သူမကိုအားပေးစကားပြောလ ာတာတဲ့ အ ကြောင်းကုိပြောပြလာ တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး
August 12, 2021 100million 0
ဆေးရုံတက်နေတဲ့မိခင်ကသူမကိုအားပေးစကားပြောလာတာတဲ့ းအကြောင်းကုိပြောပြလာတဲ့သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးကတော့ပြည်သူ့အချစ်တော်မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီးသရုပ်ဆောင်မှုပိုင်းမှာအင်မတန်ကောင်းလွန်းတာကြောင့်ပရိတ်သတ်ကြီးတွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီမင်းသမီးချောပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးကသရုပ်ဆောင်ကောင်းရုံတင်မကပဲနဲ့အမိုက်သားအသံပါဝါဖြင့်တေးသီချင်းများကိုလဲတီဆိုထားပါသေးတယ်၊သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးကအားကိုအားထားရတဲ့သူမရဲ့ဖေဖေ၊မေမေနဲ့မောင်းလေးကိုလဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအေးချမ်းတဲ့မိသားစုလေးကိုတည်ဆောက်ထားပါတယ်နော်။ ဖွေးဖွေးကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာရဲရဲဝင့်ဝင့်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅ကဖြင့်မတရားအမှုဖွင့်ထားခြင်းခံရပြီးဘေးကင်းရာကိုရှောင်တိမ်းနေရပါတယ်။ ဖွေးဖွေးကရှောင်တိမ်းနေတဲ့အချိန်မှာမိခင်ကြီးဖြစ်သူကဆေးရုံတင်နေရတယ်ဆိုပေမယ့်လဲသူမကိုအားပေးစကားပြောလာကြောင်းကိုအခုလိုပြောကြားထားပါသေးတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးရဲ့မိခင်ကြီးကစိတ်မပူနဲ့၊တဖြည်းဖြည်းအားလုံးကောင်းလာပါလိမ့်မယ်၊စိတ်ပူရင်တပန်းရှုံး၊သူ့အလိုအတိုင်းပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်သူမကိုပြောကြားထားပြီးဖွေးဖွေးကလဲဟုတ်တရ်အမေ၊အမေ့လိုပဲတွေးတော့မယ်ဆိုပြီးစာပြန်ထားပါတယ်။ ဖွေးဖွေးကလဲဆေးရုံတက်နေတဲ့အမေကသမီးကိုပြန်အားပေးနေတာဆိုပြီးသူမရဲ့FacebookStoryမှာပြန်လည်ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊ဖွေးဖွေးရဲ့မိခင်ကြီးလဲအမြန်ဆုံးသက်သာလာပြီးဖွေးဖွေးလဲဘေးအန္တာရာယ်ကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Zawgyi vision သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးကတော့ပြည်သူ့အချစ်တော်မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီးသရုပ်ဆောင်မှုပိုင်းမှာအင်မတန်ကောင်းလွန်းတာကြောင့်ပရိတ်သတ်ကြီးတွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီမင်းသမီးချောပဲဖြစ်ပါတယ်၊ဖွေးဖွေးကသရုပ်ဆောင်ကောင်းရုံတင်မကပဲနဲ့အမိုက်သားအသံပါဝါဖြင့်တေးသီချင်းများကိုလဲတီဆိုထားပါသေးတယ်၊သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးကအားကိုအားထားရတဲ့သူမရဲ့ဖေဖေ၊မေမေနဲ့မောင်းလေးကိုလဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအေးချမ်းတဲ့မိသားစုလေးကိုတည်ဆောက်ထားပါတယ်နော်။ ဖွေးဖွေးကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာရဲရဲဝင့်ဝင့်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅ကဖြင့်မတရားအမှုဖွင့်ထားခြင်းခံရပြီးဘေးကင်းရာကိုရှောင်တိမ်းနေရပါတယ်၊ဖွေးဖွေးကရှောင်တိမ်းနေတဲ့အချိန်မှာမိခင်ကြီးဖြစ်သူကဆေးရုံတင်နေရတယ်ဆိုပေမယ့်လဲသူမကိုအားပေးစကားပြောလာကြောင်းကိုအခုလိုပြောကြားထားပါသေးတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးရဲ့မိခင်ကြီးကစိတ်မပူနဲ့၊တဖြည်းဖြည်းအားလုံးကောင်းလာပါလိမ့်မယ်၊စိတ်ပူရင်တပန်းရှုံး၊သူ့အလိုအတိုင်းပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်သူမကိုပြောကြားထားပြီးဖွေးဖွေးကလဲဟုတ်တရ်အမေ၊အမေ့လိုပဲတွေးတော့မယ်ဆိုပြီးစာပြန်ထားပါတယ်၊ဖွေးဖွေးကလဲဆေးရုံတက်နေတဲ့အမေကသမီးကိုပြန်အားပေးနေတာဆိုပြီးသူမရဲ့FacebookStoryမှာပြန်လည်ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ Credit klcelenews ဆေးရုံတက်နေတဲ့မိခင်ကသူမကိုအားပေးစကားပြောလာတာတဲ့ းအကြောင်းကုိပြောပြလာတဲ့သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးသရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးကတော့ပြည်သူ့အချစ်တော်မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီးသရုပ်ဆောင်မှုပိုင်းမှာအင်မတန်ကောင်းလွန်းတာကြောင့်ပရိတ်သတ်ကြီးတွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီမင်းသမီးချောပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖွေးဖွေးကသရုပ်ဆောင်ကောင်းရုံတင်မကပဲနဲ့အမိုက်သားအသံပါဝါဖြင့်တေးသီချင်းများကိုလဲတီဆိုထားပါသေးတယ်၊သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးကအားကိုအားထားရတဲ့သူမရဲ့ဖေဖေ၊မေမေနဲ့မောင်းလေးကိုလဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအေးချမ်းတဲ့မိသားစုလေးကိုတည်ဆောက်ထားပါတယ်နော်။ဖွေးဖွေးကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာရဲရဲဝင့်ဝင့်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅ကဖြင့်မတရားအမှုဖွင့်ထားခြင်းခံရပြီးဘေးကင်းရာကိုရှောင်တိမ်းနေရပါတယ်။ဖွေးဖွေးကရှောင်တိမ်းနေတဲ့အချိန်မှာမိခင်ကြီးဖြစ်သူကဆေးရုံတင်နေရတယ်ဆိုပေမယ့်လဲသူမကိုအားပေးစကားပြောလာကြောင်းကိုအခုလိုပြောကြားထားပါသေးတယ်နော်။သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးရဲ့မိခင်ကြီးကစိတ်မပူနဲ့၊တဖြည်းဖြည်းအားလုံးကောင်းလာပါလိမ့်မယ်၊စိတ်ပူရင်တပန်းရှုံး၊သူ့အလိုအတိုင်းပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်သူမကိုပြောကြားထားပြီးဖွေးဖွေးကလဲဟုတ်တရ်အမေ၊အမေ့လိုပဲတွေးတော့မယ်ဆိုပြီးစာပြန်ထားပါတယ်။ဖွေးဖွေးကလဲဆေးရုံတက်နေတဲ့အမေကသမီးကိုပြန်အားပေးနေတာဆိုပြီးသူမရဲ့FacebookStoryမှာပြန်လည်ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊ဖွေးဖွေးရဲ့မိခင်ကြီးလဲအမြန်ဆုံးသက်သာလာပြီးဖွေးဖွေးလဲဘေးအန္တာရာယ်ကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။Zawgyi visionသရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးကတော့ပြည်သူ့အချစ်တော်မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီးသရုပ်ဆောင်မှုပိုင်းမှာအင်မတန်ကောင်းလွန်းတာကြောင့်ပရိတ်သတ်ကြီးတွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီမင်းသမီးချောပဲဖြစ်ပါတယ်၊ဖွေးဖွေးကသရုပ်ဆောင်ကောင်းရုံတင်မကပဲနဲ့အမိုက်သားအသံပါဝါဖြင့်တေးသီချင်းများကိုလဲတီဆိုထားပါသေးတယ်၊သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးကအားကိုအားထားရတဲ့သူမရဲ့ဖေဖေ၊မေမေနဲ့မောင်းလေးကိုလဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအေးချမ်းတဲ့မိသားစုလေးကိုတည်ဆောက်ထားပါတယ်နော်။ဖွေးဖွေးကတော့တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာရဲရဲဝင့်ဝင့်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅ကဖြင့်မတရားအမှုဖွင့်ထားခြင်းခံရပြီးဘေးကင်းရာကိုရှောင်တိမ်းနေရပါတယ်၊ဖွေးဖွေးကရှောင်တိမ်းနေတဲ့အချိန်မှာမိခင်ကြီးဖြစ်သူကဆေးရုံတင်နေရတယ်ဆိုပေမယ့်လဲသူမကိုအားပေးစကားပြောလာကြောင်းကိုအခုလိုပြောကြားထားပါသေးတယ်နော်။သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးရဲ့မိခင်ကြီးကစိတ်မပူနဲ့၊တဖြည်းဖြည်းအားလုံးကောင်းလာပါလိမ့်မယ်၊စိတ်ပူရင်တပန်းရှုံး၊သူ့အလိုအတိုင်းပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်သူမကိုပြောကြားထားပြီးဖွေးဖွေးကလဲဟုတ်တရ်အမေ၊အမေ့လိုပဲတွေးတော့မယ်ဆိုပြီးစာပြန်ထားပါတယ်၊ဖွေးဖွေးကလဲဆေးရုံတက်နေတဲ့အမေကသမီးကိုပြန်အားပေးနေတာဆိုပြီးသူမရဲ့FacebookStoryမှာပြန်လည်ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။Credit klcelenews klcelenews
သားေလးရဲ႕ အၿပဳံးေတြ ဒီထက္ အလွဆုံးျဖစ္ေအာင္ ခြဲစိတ္ေပးဖို႔ အတြက္ အားေမြးေနၿပီဆိုတဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝ…
သားေလးရဲ႕ အၿပဳံးေတြ ဒီထက္ အလွဆုံးျဖစ္ေအာင္ ခြဲစိတ္ေပးဖို႔ အတြက္ အားေမြးေနၿပီဆိုတဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝ… The post သားေလးရဲ႕ အၿပဳံးေတြ ဒီထက္ အလွဆုံးျဖစ္ေအာင္ ခြဲစိတ္ေပးဖို႔ အတြက္ အားေမြးေနၿပီဆိုတဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝ… appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
ညအချိန်မှာတောင်မအိပ်ဘဲလိုအပ်တာတွေကိုလိုက်လံလှူဒါန်းပေးနေတဲ့သရုပ်‌ေဆာင်ခိုင်နှင်းဝေ သရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကတော့နေ့ညမနားအလှူခံရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့ပြည်သူများကိုလိုအပ်တာတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြသွားရောက်လှူဒါန်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ခိုင်နှင်းဝေကတော့နေ့တိုင်းနီးပါးအလှူအတန်းပြုလုပ်ပေးချင်တာ​ကြောင့်သူမကတွေးတော့ကြံစပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူများအတွက်တကယ့်အသုံးဝင်မယ့်နည်းလမ်းကိုလဲစဥ်းစားပေးပြီးရအောင်လှူဒါန်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရောဂါကပ်ဆိုးကြီး၊သဘာဝဘေးအန္တာရာယ်တွေကြောင့်အစားအသောက်ကအစအနေအထိုင်တွေကအဆုံးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေများစွာရှိနေပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေကလဲအလှူလက်ခံရရှိထားတဲ့ငွေတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများဝယ်ယူကာညအချိန်အထိမနားတန်းလှူဒါန်းပေးနေ​ကြောင်းကိုလဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်စွာအခုလိုပြောကြားထားပါသေးတယ်နော်။ ခိုင်နှင်းဝေကအလှူငွေတစ်သောင်း၊ဆန်၃ပြည်နှင့် ဆေးဝါးများကိုအဆင်မပြေတဲ့အိမ်ထောင်စုများအားနေ့စဉ်ရှာပြီးလှူဒါန်းပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဆန်မရှိတဲ့အိုးထဲမှာဆန်လေးတွေပြည့်သွားတဲ့အတွက်ပီတိ ကုသိုလ်လေးလဲရခဲ့ပါတယ်၊လိုက်လှူရင်းနဲ့မိုးချုပ်သွားလို့ပင်ပန်းရပေမဲ့လတ်တလောအခက်အခဲများ အဆင်ပြေသွားရင်အမောပြေရပါတယ်။ ကျမနှင့်ခုနှစ်ရက်သားသမီးများစုပေါင်း၍ကုသိုလ်အစုစုတို့အားနေ့စဉ်ကာလဒါနအဖြစ်ပြုလုပ်လှူဒါန်းကုသိုလ်ပြုနေပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Zawgyi vision သရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကတော့နေ့ညမနားအလှူခံရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့ပြည်သူများကိုလိုအပ်တာတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြသွားရောက်လှူဒါန်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ခိုင်နှင်းဝေကတော့နေ့တိုင်းနီးပါးအလှူအတန်းပြုလုပ်ပေးချင်တာ​ကြောင့်သူမကတွေးတော့ကြံစပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူများအတွက်တကယ့်အသုံးဝင်မယ့်နည်းလမ်းကိုလဲစဥ်းစားပေးပြီးရအောင်လှူဒါန်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရောဂါကပ်ဆိုးကြီး၊သဘာဝဘေးအန္တာရာယ်တွေကြောင့်အစားအသောက်ကအစအနေအထိုင်တွေကအဆုံးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေများစွာရှိနေပါတယ်၊ခိုင်နှင်းဝေကလဲအလှူလက်ခံရရှိထားတဲ့ငွေတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများဝယ်ယူကာညအချိန်အထိမနားတန်းလှူဒါန်းပေးနေ​ကြောင်းကိုလဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်စွာအခုလိုပြောကြားထားပါသေးတယ်နော်။ ဆန်မရှိတဲ့အိုးထဲမှာဆန်လေးတွေပြည့်သွားတဲ့အတွက်ပီတိ ကုသိုလ်လေးလဲရခဲ့ပါတယ်၊လိုက်လှူရင်းနဲ့မိုးချုပ်သွားလို့ပင်ပန်းရပေမဲ့လတ်တလောအခက်အခဲများ အဆင်ပြေသွားရင်အမောပြေရပါတယ်၊ကျမနှင့်ခုနှစ်ရက်သားသမီးများစုပေါင်း၍ကုသိုလ်အစုစုတို့အားနေ့စဉ်ကာလဒါနအဖြစ်ပြုလုပ်လှူဒါန်းကုသိုလ်ပြုနေပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Credit klcelenews ညအချိန်မှာတောင်မအိပ်ဘဲလိုအပ်တာတွေကိုလိုက်လံလှူဒါန်းပေးနေတဲ့သရုပ်‌ေဆာင်ခိုင်နှင်းဝေသရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကတော့နေ့ညမနားအလှူခံရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့ပြည်သူများကိုလိုအပ်တာတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြသွားရောက်လှူဒါန်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ခိုင်နှင်းဝေကတော့နေ့တိုင်းနီးပါးအလှူအတန်းပြုလုပ်ပေးချင်တာ​ကြောင့်သူမကတွေးတော့ကြံစပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူများအတွက်တကယ့်အသုံးဝင်မယ့်နည်းလမ်းကိုလဲစဥ်းစားပေးပြီးရအောင်လှူဒါန်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရောဂါကပ်ဆိုးကြီး၊သဘာဝဘေးအန္တာရာယ်တွေကြောင့်အစားအသောက်ကအစအနေအထိုင်တွေကအဆုံးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေများစွာရှိနေပါတယ်။ခိုင်နှင်းဝေကလဲအလှူလက်ခံရရှိထားတဲ့ငွေတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများဝယ်ယူကာညအချိန်အထိမနားတန်းလှူဒါန်းပေးနေ​ကြောင်းကိုလဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်စွာအခုလိုပြောကြားထားပါသေးတယ်နော်။ခိုင်နှင်းဝေကအလှူငွေတစ်သောင်း၊ဆန်၃ပြည်နှင့် ဆေးဝါးများကိုအဆင်မပြေတဲ့အိမ်ထောင်စုများအားနေ့စဉ်ရှာပြီးလှူဒါန်းပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆန်မရှိတဲ့အိုးထဲမှာဆန်လေးတွေပြည့်သွားတဲ့အတွက်ပီတိ ကုသိုလ်လေးလဲရခဲ့ပါတယ်၊လိုက်လှူရင်းနဲ့မိုးချုပ်သွားလို့ပင်ပန်းရပေမဲ့လတ်တလောအခက်အခဲများ အဆင်ပြေသွားရင်အမောပြေရပါတယ်။ကျမနှင့်ခုနှစ်ရက်သားသမီးများစုပေါင်း၍ကုသိုလ်အစုစုတို့အားနေ့စဉ်ကာလဒါနအဖြစ်ပြုလုပ်လှူဒါန်းကုသိုလ်ပြုနေပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။Zawgyi visionသရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေကတော့နေ့ညမနားအလှူခံရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့ပြည်သူများကိုလိုအပ်တာတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြသွားရောက်လှူဒါန်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ခိုင်နှင်းဝေကတော့နေ့တိုင်းနီးပါးအလှူအတန်းပြုလုပ်ပေးချင်တာ​ကြောင့်သူမကတွေးတော့ကြံစပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူများအတွက်တကယ့်အသုံးဝင်မယ့်နည်းလမ်းကိုလဲစဥ်းစားပေးပြီးရအောင်လှူဒါန်းပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရောဂါကပ်ဆိုးကြီး၊သဘာဝဘေးအန္တာရာယ်တွေကြောင့်အစားအသောက်ကအစအနေအထိုင်တွေကအဆုံးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေများစွာရှိနေပါတယ်၊ခိုင်နှင်းဝေကလဲအလှူလက်ခံရရှိထားတဲ့ငွေတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများဝယ်ယူကာညအချိန်အထိမနားတန်းလှူဒါန်းပေးနေ​ကြောင်းကိုလဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်စွာအခုလိုပြောကြားထားပါသေးတယ်နော်။ဆန်မရှိတဲ့အိုးထဲမှာဆန်လေးတွေပြည့်သွားတဲ့အတွက်ပီတိ ကုသိုလ်လေးလဲရခဲ့ပါတယ်၊လိုက်လှူရင်းနဲ့မိုးချုပ်သွားလို့ပင်ပန်းရပေမဲ့လတ်တလောအခက်အခဲများ […]
ပရိသတ္ႀကီးေရ မင္းေမာ္ကြန္းကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းေတြမွာေရာ ႏွင္းဆီအၿငိမ့္မွာေရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕အခ်စ္ေတြကို သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္သူျဖစ္ပါတယ္။မင္းေမာ္ကြန္းကေတာ့ အႏုပညာမွာလည္း က်ရာဇာတ္႐ုပ္ကေန သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္သလို အႏုပညာသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာ က္မွာလည္း နာမည္ပ်က္မရွိေအာင္ ေနထိုင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အႏုပညာေလာကမွာလည္း ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးဇင္ဝိုင္းကိုလည္း လူတိုင္းကေလးစားအားက်ရသလို သားျဖစ္သူ မင္းေမာ္ကြန္းကလည္း အမွန္တရားဘက္ကို ရဲရဲဝင့္ဝင့္ေနရဲသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္.။ ျပည္သူေတြရဲ႕အတူ ခံစားခ်က္ေတြထပ္တူက်ခဲ့သူျဖစ္တဲ့အျပင္ […]
August 11, 2021 100million 0
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် မေတိုးခိုင်ဟာ နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တာကြောင့် အကျဉ်းထောင်ထဲတွင် လေးလကျော်လောက် နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်နော်။ ပြီးတဲ့အခေါက်က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ထဲမှာ မေတိုးခိုင်ပါဝင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့အဒေါ်ဖြစ်တဲ့ အူဝဲတို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ အခုထိ မလွတ် မြောက်သေးပါဘူးနော်။ မေတိုးခိုင်ဟာ ထောင်ကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိခဲ့တာကြောင့် အတတ်နိုင်ဆုံး […]
တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူငယ် ကြယ်ပွင့် လေး​ တွေများစွာ ဆုံးရှုံးနေ ရခြင်း ရဲ့ အဓိကတရားခံ ကို ရဲဝင့် ပြတ်သားစွာ ပြောပြလိုက်တဲ့ ခင်သဇင်
အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်ခု ရရှိထားပြီး ပရိသတ်အားပေးချစ်ခင်မှုတွေ နဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင်ခင်သဇင်ကတော့ ပြည်သူတွေ နဲ့အတူ ရပ်တည်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ ခင်သဇင်ကတော့ လတ်တလောအခြေအနေတွေ မှာ အခက်အခဲ တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီး အားဖြည့်ကူညီနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေအပြင် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် […]
ပရိသတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမတိုးခိုင္ဟာ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့တာေၾကာင့္အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ေလးလေက်ာ္ေလာက္ ေနထိုင္ခဲ့ရပါတယ္ေနာ္။ ၿပီးတဲ့အေခါက္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ထဲမွာ ေမတိုးခိုင္ပါဝင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း သူ႔ရဲ႕အေဒၚျဖစ္တဲ့ အူဝဲတို႔ ဇနီးေမာင္ ႏွံကေတာ့ အခုထိ မလြတ္ေျမာက္ေသးပါဘူးေနာ္။ ေမတိုးခိုင္ဟာ ေထာင္ကထြက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈေတြ ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး စိတ္တည္ၿငိမ္ေအာင္ ေနခဲ့ပါတယ္တဲ့ေနာ္။ဒီကာအတြင္း […]
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ……ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးေတြရဲ႕ အသည္းေက်ာ္ မင္းသားေခ်ာပိုင္တံခြန္ဟာဆိုရင္ ျပည္တြင္းမွာတင္မကပဲျပည္ပႏိုင္ငံေတြအထိပါထိုးေဖာေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ ပိုင္တံခြန္ဟာ မိန္းကေလးပရိတ္သတ္ေတြတင္အားေပးၾကမ္းတာမဟုတ္ပဲ ေယာက်ာ္းေလးပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကို အျပည့္အဝရရွိထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။စိတ္ထားျဖဴစင္လြန္ၿပီးေဖာ္ေ႐ြတတ္တဲ့ သူရဲ႕အမူအက်င့္ေလးေတြက ပရိတ္သတ္ကိုထူးျခားစြာဆြဲေဆာင္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပိုင္တံခြန္က ေရွ႕ဆုံးကေန ျပည္သူလူထုနဲ႔အတုူတက္ႂကြစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ဒီလိုလူထုလႈပ္ရွားမႈမွာပါဝင္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပုဒ္မ၅၀၅(က)ျဖင့္အမႈဖြင့္ တရားစြဲခံရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ပိုင္တံခြန္ဟာတရားစြဲခံရၿပီးေနာက္မွာ က်န္းမာေရးမေကာင္းသျဖင့္ ေနအိမ္သို႔ျပန္လာစဥ္ ဖမ္းဆီးခံလိုက္ရတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။ ဒီတစ္ခါမွာဆိုရင္လည္း ပိုင္တံခြန္က (၆)လပိုင္း […]
သရုပ်ဆောင် ခန့်စည်သူကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို သိမ်းပိုက် ရရှိထားသူ တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလှူအတန်းနဲ့ ပတ်သက်လာရင်လည်း လက်မနှေးတတ်တာကြောင့် လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ အမြဲလှူဒါန်းနေတာကိုလည်း ကြည်နူးဖွယ် မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။ အလုပ်အကိုင်တွေ ရပ်နားထားရလို့ စားဝတ်နေရး အဆင်မပြေကြတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက်လည်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့ […]
စစ္တပ္ကိုေထာက္ခံေနတဲ့ကေမာၻဇဘဏ္ကို လူသုံးမ်ားေအာင္လုပ္ေပးေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္နႏၵါလႈိင္ရဲ႕ခင္ပြန္း… The post စစ္တပ္ကိုေထာက္ခံေနတဲ့ကေမာၻဇဘဏ္ကို လူသုံးမ်ားေအာင္လုပ္ေပးေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္နႏၵါလႈိင္ရဲ႕ခင္ပြန္း… appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
« 1 … 124 125 126 … 170 »